Tough Soldier’s Dream | Dam Mang
SOUTH SUDAN | November 2
Then the angels disappeared. Daniel went into the church. He saw people lying dead on the floor. Onlyasmall 2-year-old boy was alive, and he asked the boy to pray with him. As they prayed, the dead church members came alive.
The next Sabbath, he and his wife attended the Juba Central Seventh-day Adventist Church together. Three months later, on January 20, 2018, the couple was baptized.
Thank you for your 2016 Thirteenth Sabbath Offering that helped construct children’s Sabbath School classrooms at Juba Central Seventh-day Adventist Church, where Daniel worships on Sabbaths. Part of this quarter’s offering will help constructahigh school near the church.
WatchaYouTube video of Daniel: bit.ly/Daniel-Machiek
Download high-resolution photos and more from the ADAMS databank: bit.ly/Tough-Soldiers-Dream
The first converts in Sudan were Munir Andrawis and his wife. After attending Middle East College in Beirut, they returned to Sudan in 1955 and began missionary work in the capital. They distributed relief clothing and promoted Bible correspondence school work.
The church hasamedical center, the Munuki Seventh-day Adventist Clinic;aBible correspondence school; andaradio station, Salvation Radio FM, in the city of Juba in South Sudan.
Religions followed by the South Sudanese include traditional indigenous religions, Christianity, and Islam.
နိုဝင်ဘာလ(၂)ရက်၊ ရေးသားသူ-Daniel Deng Michie(၃၉)နှစ်၊
“ဒံနီရယ်”ဟာ တောင်ပိုင်းဆူဒန်နိုင်ငံရဲ့မြို့တော် ယူးဘားမြို့ရဲ့အနောက်မြောက်ဖက်မှာ
၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ဒီဇင်ဘာလမှာ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် သုံးရက်လုံးလုံးသူအစာ
ဖို့အခြေအနေမှာရှိနေပါတယ်။ ကျေးဇူးပြုပြီးဆူဒန်နိုင်ငံသားတွေကိုထိန်းချုပ်တော်မူပါ” လို့”ဒံနီရယ်”
တတိယမြောက်နေ့ရဲ့ညမှာ အိပ်မက်တစ်ခုမက်ခဲ့ပါတယ်။ တောက်ပတဲ့ကောင်းကင်တ
မန်သုံးပါးဟာ သူ့ရဲ့အိပ်ခန်းမှာလာရောက်ခဲ့ပါတယ်။ ကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးက၊”ထပြီးငါတို့နဲ့
ခြင်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့သီချင်းကို သီဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ နောက်ပြီးတော့၊ကောင်းကင်တမန်တွေဟာ
သူ့ကို မြို့ပြင်မှာရှိတဲ့ “ယီရောလ်”ကန်သို့ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပါတယ်။ ကောင်းကင်တမန်တပါးက
၂နှစ်အရွယ်သာရှိသေးတဲ့ ယောကျာ်းလေးသာအသက်ရှင်ခြ့ပြီး၊ သူတို့တတွေအတူတကွဆုတောင်း
ပိုင်းသုံးနှစ်လုံးလုံးသူ့အိပ်မက်ကို အံ့ဩခဲ့ပြီး၊ အနက်ကိုအဓိပ္ပါယ်ကိုလည်းမသိနိုင်ခဲ့ပါ..။
၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ တနင်္ဂနွေနေ့ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းအစီအစဉ်မှာ”ဒံနီရယ်”တို့ဇနီးမောင်နှံ
ကိုတရားဟောဆရာကရေနှစ်ခြင်းပေးခဲ့ပါတယ်။ “ဒံနီရယ်”ဟာရေထဲကထလာတဲ့အခါ ငိြုွေကးခဲ့
ပါတယ်။ တောင်ပိုင်းဆူဒန်နိုင်ငံမှာတော့၊ အမျိုးသားတွေဟာမငိုကြတဲ့အပြင်ကြံ့ခိုင်သန်မာတဲ့စစ်
ပတ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒံနီရယ်က ရေနှစ်ခြင်းခံတဲ့နေ့ကနေယနေ့အထိရပ်လို့မရပဲ၊ငိုနေရကြောင်း၊မျက်
“ဦးလေးရယ်၊အဲဒီအသင်းတော်မှာဘာဖြစ်လို့ရေနှစ်ခြင်းခံရတာလဲ။ အဲဒါဟာ မှန်တဲ့အ
နောက်တစ်ပါတ်၊ဥပုသ်တော်နေ့မှာ ဒံနီရယ်တို့ဇနီးမောင်နှံဟာ ယူးဘားဗဟိုသတ္တမနေ့
ခြင်းခံယူခဲ့ကြပါတယ်။ ရေထဲကနေထလာတဲ့အခါ”ဒံနီရယ်”ဟာ မျက်ရည်တစ်စက်မှမကျတော့
“ဒံနီရယ်”ရဲ့ ပျော်ရွှင်တဲ့အသစ်သောအသက်တာကြောင့် သူရဲ့ညီအစ်ကိုတစ်ဦးရဲ့ဇနီး
၂၀၁၃ ခုနှစ်မှာ၊ဆူဒန်နိုင်ငံရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် သူ့ရဲ့ဆုတောင်းချက်ကိုသခင်ယေရှု
အသင်းတော်မှာ ဥပုသ်စာဖြေကျောင်းအတန်းအတွက်အခန်းတွေကို ၂၀၁၆ခုနှစ်(၁၃)ပတ်အလှူငွေ
အထက်တန်းကျောင်းတည်ဆောက်ရာ၌ အသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ စေတနာထက်သန်စွာဖြင့်
Previous Article Searching in 13 Churches
Next Article Bus Preacher